कोरोनाका कुराः भनेको नमानेपछि… - Jhapa Online
कोरोनाका कुराः भनेको नमानेपछि…
मामु ए मामु…
मामुले भित्रैबाट जवाफ दिनुभयो, “कहाँँ पुगेर आइस् ? हात धोएर मात्र भित्र आइज है ।” म सागसब्जी र मामुको औषधी लिन पसल गएको थिएँ । सागसब्जीलाई सुरक्षित ठाउँमा राखेर हात धोएर भित्र पसेँ । औषधीलाई झोलाबाट झिकेर झोलालाई बाहिर सुरक्षित ठाउँमा राखेर हातमा सानिटाइज लगाएँ ।
मामुले सोध्नुभयो, “किन अघि मामु भन्दै चिच्याउदै थिइस् त ?” अघि अलिक आत्तिएको थिएँ, अब भनौ कि नभनौ म एकछिन सोच्न बाध्य भएँ । मैले भने, “धेरै आत्तिनु पर्ने त होइन तर अब अझै सजग र होसियार हुनुपर्ने दिन आइसकेछ, अस्ति हाम्रो घरमा आउने पल्लो घरे भाउजुले त क्वारेन्टाइन बस्नु पर्ने भएछ नि ।”
हँ…, के भन्छ यो किन र कसरी ? मामु अलिक डराउनु भयो । मैले भने, “हामीले डराउनु पर्दैन मामु, उनीसँग हामी नजिक बसेनौ । त्यसबेलै उनलाई त हामीले सम्झाएर पठाएका हौ । उनी बसेको मुडा पनि धाएको हो । खासमा उनी त्यसदिन आफ्नो छोराको जन्मदिनको निम्तो दिन आएकी रहिछन । मेरो कुराले मुरमुरिएर नबोलाई गइछन्, राम्रै गरिन । बोलाकै भए पनि हामी जाने थिएनौ ।
उनी यहाँ आउनु ७ दिनअघि उनको माइतमा विदेशबाट आएको भाइलाई भेट्न गएकी रहिछन् । त्यहाँ उनी ५ दिन बसेर फर्केकी रहिछन् । २५ दिन अघि विदेशबाट आएको माइलो भाइलाई जाँच गर्दा पोजेटिभ देखिएपछि उनको घरका सबै सदस्यहरू र ५ दिन सँगै बसेकी दिदीलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेको रहेछ ।
यदि उक्त भाइरस उनमा पनि देखियो भने उनको घरमा अनि छोराको जन्मदिनमा आउने सबैले होम क्वारेनटाइन बस्नु पर्ने हुन्छ । उनलाई भेट्ने सबैले होस पुर्याउनै पर्छ । त्यसैले आफ्नै घर भित्र पनि दुई मिटर दूरी कायम राख्नु पर्छ, भनेर भनिएको रहेछ ।
आशा गरौँ, उनको भाइको दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आओस् । तर, पहिलो रिपोर्टले पोजिटिभ देखाउनु उनलाई संक्रमण थियो भन्नू हो । अहिले ठीक भएको पनि हुन सक्छ किनकि अझैसम्म कुनै लक्षण देखिएको छैन रे, तरपनि संक्रमणको समयमा उनको दिदीलाई सरेको हुन सक्छ । ती भाउजु र उनको माइतिले भने भाइको दोस्रो रिपोर्टले नेगेटिभ देखाए पनि क्वारेन्टाइन बस्नै पर्छ । त्यसपछि उनीहरूको पनि चेक जाँच हुनु पर्छ । नत्र उनीहरू सुरक्षित छन् वा छैनन्, थाहा हुँदैन ।
सबै कुरा सुनेपछि मामुले ठूलो सास फेर्दै भन्नुभयो, “अस्ति तैले सम्झाउँदा रिसाउने मान्छेले बल्ल बुझ्यो होला । हामीले यो समयमा नचाहेर पनि समाजबाट टाढिनु पर्याे भन्ने लागेको थियो, यो घटना ले अब त सबैको आँखा खुल्यो होला ।”
हामीले भनेका कुराले चित्त दुखाएर हाम्रो घरतिर नहेरी हिँड्नेलाई मन भित्रैबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । कारोनाको प्रकोप सकिएपछि बरू माफी माग्न म आफैँ जानेछु ।
प्रदेश १ पाँच हजार बढीको कोरोना परीक्षण
पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूको मागः ढुवानी रकम जोडेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न पाऔँ